ရေးသားလိုက်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးကဘားတန်းကို Option bar
လို့လို့ခေါ်ပြီးအနီဝိုင်းထားတဲ့နေရာကို Tool Box လို့ခေါ်ပါတယ်။
choose start>progams>adobe mastercollection cs6>adobe photoshop CS6. လို့ရှာလိုက်ပါ
Photoshop icon တွေ့လျှင်ဝင်လို့ရပါပြီ။
အဲမှာဆိုရင် Click File>New.
Enter width=130px,height=120px,Resolution=72px and click OK
ပြီးမှ press u ko နိုပ်လိုက်ပါ or
Rectangle tool ထဲမှ rounded Rectangle tool ကိုရွေးပါ
Gradient Tool ၂ချက် နိုပ်ပြီး
Foreground to background gradient. ရွေးပါ။
Click ok နိုပ်လိုက်ပါ
New layer နိုပ်ပြီး ပု့ကိုအပေါ်မှအောက်သို့ဆွဲလိုက်ပါ။
selection ၀င်နေလျှင် Ctrl+D ကိုနိုပ်ပါ။
နောက်ထပ် new layer ပြီးElliptical Marquee Tool ကိုရွေးပြီးပုံတိုင်းဆွဲပါ။
ctrl+T နိုပ်ပြီး၄၅ဒီဂရီစောင်းလိုက်ပါပြီးရင်layer2ကိုleft click နိုပ်ပြီးပုံပွားလိုက်ပါ
select layer 2နိုပ်ပြီးlayer>Duplication Layer, click ok.
နောက်ထပ်ctrl+T နဲ့ပြောင်းလို့ရသလို click edit>transform>flip vertical.
Layer အားလုံးကို ctrl+layerအားလုံးကိုနိုပ်ပြီး ctrl+Eနဲ့ပေါင်းပြီး saveလုပ်လိုက်ပါတော့အားလုံးကို
သင်တန်းများတက်ချင်ရင်တော့KMD tranning centerတွင်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်၊
Aavashare Mym 29/01/2017 at 09:35 AM
1 Share 434 Views